‘उपमेयर भएर आउँदा सुरुमै हेपाई खानु पर्याे’ « Lalitpur Khabar
मुना अधिकारी, गोदावरी नगरपालिका ललितपुरकी उपमेयर हुन् । संविधानसभाले बनाएको नयाँ संरचना स्थानीय निकायको पहिलो कार्याकालमा उपमेयर निर्वाचित भएकी अधिकारीसँग स्थानीय प्रशासनमा महिला जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाका अनुभव सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँसँगको छलफलको सम्पादित अंश :
महिलाको रुपमा उपमेयरको नेतृत्व सम्हाल्दा ५ बर्षमा कस्ता कस्ता चुनौती सामना गर्नुभयो ?
जनताको अपेक्षा सिधा बजेटमा हुने रहेछ । धेरैको बुझाई मेयरपछि उपमेयरले काम गर्ने भन्ने बुझाई रहेछ । तर उपमेयरको जिम्मेवारी न्यायिक समिती, अनुगमन लगायत हुन् । उपमेयरले राजस्व परामर्स, जग्गा जमिनको किचलो मिलाउने लगायतका काम पर्छन् । न्यायिक समितीले सबै मुद्दाहरु टुंगो लगाउन भने सक्दैन ।
उपमेयर महिला रहेको अवस्थामा कार्यालयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको व्यावहार कस्तो थियो । राजनीतिक महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण अप्ठ्यारो त भएन ?
सुरु सुरुमा मलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो । मैले सबै वडा चिनेको थिइन । म एक्कासी जनप्रतिनिधि भएर आउदा मेलै धेरै दिदी बहिनी दाजुभाइृहरुलाई भेटेको थिइन । निर्वाचनमा पनि ७ दिन भोटमा माग्नेभन्दा अरुसँग भेट भएको थिएन ।
पहिले पहिले कार्यालयमा जनताहरु आउनु हुन्थ्यो म डिल गर्न पनि सक्ने थिइन । जनताको अपेक्षा पैसासँग हुने रहेछ । तर उपमेयरसँग कुनै बजेट थिएन ।
मैले अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग जोडेर उहाँहरुको माग पुरा गराई दिएको छु । सिप भन्दा पनि सिंलाई मेसिन, साडीको बुट्टा भर्नेहरुका लागि तानजस्ता सरसामान उपलव्ध गराएको छु ।
५ वर्ष पुरा भएको अवस्थामा महिलाहरुको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छ ?
५ वर्षको अवधिमा धेरै महिलाहरुको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । म उपमेयर भएर हिडिरहँदा घमण्डी भएर होइन कि सबै संग घुलमिल भएर हिडेको छु ।
उहाँहरुमा मेरो व्यावहारले यतिको मान्छेले त गर्दो रहेछ म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास आएको देखेका छु । महिलाहरु सक्षम भएर आउनुपर्छ । आउनु हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
महिला पछिल्लो समय सक्षम हुँदै आएका छन् भने चुनौती पनि छ । घरबाहिरबाट सहयोग हुनु जरुरी छ । समाजका सबैले महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।
महिलाहरु राजनीतिक रुपमा सवल भइ सकेका हुन् ?
अहिलेका युवा पिढीहरु विदेशतिर लागेका छन् । यहाँ भएका महिलाहरुले यो धान्न सक्दैनन कि भन्ने लाग्छ । महिला रातको १२ बजे पनि घर बाहिर निस्कन सकेनन् भने केही हुदैन । एउटा पुरुष राती १२ बजे आउँछ भने महिला राती १२ बजे घरबाट निस्किन सक्दिन । रातको समयमा पुलिस केस गर्नु प¥यो । अथवा अरु केही काम गर्नु प¥यो यो समाजले त्यो महिलालाई कसरी हेर्छ ? महिला सक्षम हुन समाजको धारणा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । पढाई लेखाई मा महिला पनि पुरुष जतिकै सक्षम छन् ।
राजनीतिक पार्टीले महिलालाई अघि बढाउन सकेको छ त ?
राजनीतिक पार्टीमा फस्र्ट पर्सन पुरुष हुँदा हरेक मुख्य जिम्मेवारीमा उनीहरुकै हुने गर्छ । महिलाले दावी गरे पनि तिम्रो अहिले बेला भएको छैन भनेर पछि हटाइन्छ ।
पार्टीमा क्रियाशित सदस्यता दिदा पनि पहिले नै त्यो घरबाट पुरुषको सदस्यता हुँदा महिलालाई पनि दिन नमान्ने प्रवृत्ति छ । पुरुष निस्केको घरबाट महिलालाई पनि ठाँउ नदिने हो भने कसरी समानता हुन्छ ।
नराखी नहुने संविधानले तोकेको ठाँउमा चाहि महिलालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले नै नतोकेको भए महिलाले ठाँउ पाउने थिएनन ।
पहिलेको दाजोमा अहिले महिला अघि आएका छन् । यसरी नै अघि बढे भोलिका दिनमा बराबर हुने अवस्था आउँछ ।
तपाईले जिम्मेवारी पाए अनुरुप उपमेयरको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउनु भएको छ ?
बजार अनुगमन चाही खासै चुस्त रुपमा गर्न सकिएको छैन । जनगुनासो आधारमा अनुगमन गर्ने हो । जनगुनासो नै नआएपछि अनुगमन नगरेको हो । न्यायिक समितीमा मैले गरेको निर्णयहरुमा रिस राग चाही राखेको पाएको छैन । मैले कानूनी सल्लाह लिएर काम गर्ने गरेको छु । न्यायिक समितीको फैसलाको सन्दर्भमा कतिपय मेरा भोटरले न्याय दिदा मैले भोट हालेको छु तर मलाई सहयोग गर्नु भएन भन्ने बुझेको छु । तर मैले गल्ती भएको ठाँउमा सम्झाउने गरेको छु ।
पारिवारिक मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था रोक्ने काम गरेको छु । बलात्कारको मुद्दामा अपराधिलाई सजाय दिने काम गरेको छु । धेरै काम गर्न सकेको छु । अझै धेरै का मगर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।
महिलाले जिम्मेवारी पाएको खण्डमा सबै काम गर्न सक्छन् ।
राजनीतिमा अघि बढ्न महिलाले के गर्नु जरुरी छ ? राजनीतिमा आउन चाहने महिलालाई के सल्लाह दिनु हुन्छ ?
राजनीति भनेको समाज सेवा हो । समाजसेवाको विषयमा बुझ्नु प¥यो । सक्षम हुनु प¥यो ।
तलिम जरुरी छ । महिलाको राजनीतिक सर्कल पनि जरुरी छ । भाषणकला भन्दा पनि काम गर्ने शैली जरुरी छ । घमण्डी हुने, अरुलाई डोमिनेट गर्ने भन्दा पनि सबैसँग घुलमिल हुने, समाजमा प्रभाव हुनु पर्छ ।
महिला उपमेयर भएर आउँदा कार्यालयमा कस्ता अप्ठ्यारा भोग्नु पर्ने रहेछ ?
सुरुमा म आउँदा धेरै नै हेपाई अनुभव गर्नु प¥यो । म नितान्त नीजि क्षेत्रबाट आएको मान्छे हुँ । मलाई यहाँ भित्रको प्रशासनिक क्षेत्रदेखि लिएर कार्ययोजनाका विषयमा मलाई केही थाहा थिएन । त्यो बेला कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई यतिसम्म हेपाई खानु पर्ने रहेछ भनेर बुझे ।
अहिले सबैसँग चिनजान र अनुभव हुँदै आयो । जनताले काम लिएर आउँदा काम नभए आफै अगाडि बढेर काम गराएको छु ।
मेयर र उपमेयरमा फरक छ । जिम्मेवारी फरक छ । तर कतिपय ठाँउमा मैले परिवर्तन गरेको छु । त्याहाका जनताले गुनासो गर्नु हुन्न भने केही थाहा हुँदैन ।
तपाईहरुले जिम्मेवारी लिएपछि गोदावरी नगरमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
धेरै परिवर्तन आएको छ । थोरै बजेटमा धेरै काम गरेका छौं । एउटा वडाबाट अर्को वडा जोड्ने बाटोलाई प्राथमिकता दिएका छौं । सन्तानेश्वर, बज्रवाराही,विशंखुनारायण,नवदुर्गा मन्दिर,तिलेश्वर, लेले मनकामनालगायत मन्दिरहरु पुर्ननिर्माण गरेका छौं ।
तपाईहरु पनि यही ठाँउमा बस्नु हुन्छ देखिरहनु भएकै होला । आगामी दिनहरुमा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन अरु योजना पनि अघि बढ्नेछन् ।
कोरोना महामारी, नयाँ स्थानीय निकायको संरचना र नयाँ कार्याकाल भएकाले भने जसरी काम गर्न सकिएन । त्यसैले कार्याकाल दोहो¥याउने विचार गरेको छु ।